राजा महेन्द्र पछिको आत्मबल ओलीमा देखियोः सौरभ | dhamakadaily.com ::
राजा महेन्द्र पछिको आत्मबल ओलीमा देखियोः सौरभ
|| 283 Views || Published Date : 7th June 2016 |
केपी ओली कुनै समय एमालेभित्रका अल्पमतको प्रतिनिधित्व गर्ने असन्तुष्ट नेता थिए । उनलाई माधव नेपाल र झलनाथ खनालले ‘ब्राकेट हालेर शक्तिमा आउनबाट पटक–पटक रोके । तर, त्यो ब्राकेटलाई तोडेर ओली एमालेको मात्रै नभएर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा आइछाडे ।
राजा महेन्द्रको शासनकालयता पहिलोपटक यस्तो भएको छ, जहाँ भारतले नचाहेका कुराहरु नेपालमा भइरहेका छन् । ओलीको पर्फमेन्स भनेको राजा महेन्द्रको कार्यकालपछि नेपालको फरेन पोलिसीमा ठूलो टर्निङ प्वाइन्ट हो । महेन्द्र पनि बरु २२ सालपछि भारतसँग थाकेका। थिए ।
संविधान निर्माणमा केपी ओलीको निणार्यक भूमिका रह्यो, अपितु त्यतिबेला उनी प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिएनन । संविधानमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता जनताले नरुचाएका विषयवस्तुहरु थिए, तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि संविधान घोषणा हुनु नेपालका लागि धेरै दृष्टिले महत्वपूर्ण थियो । अहिले पछाडि फर्केर हेर्दा के महसुस हुन्छ भने त्यतिबेला संविधान घोषणा नभएको भए नेपालको सार्वभौमिकता माथि नै प्रश्न खडा हुने रहेछ । भारतले नेपालको संविधान कहिले पनि बन्न नदिने रहेछ भन्ने अहिले बुझिदैछ ।
अहिलेका ओली भनेको समकालिन सबै नेताहरुभन्दा लामो भिजन भएको नेताको रुपमा मैले पाएको छु । उनी एक स्टेप पछाडि हटेर दुई स्टेप अगाडि बढ्ने सोच राख्छन । अनेक कमजोरीका बाबजुद पनि उनी अहिलेको समयमा नेपाललाई आवश्यक सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन। यतिबेला माधव नेपाल पाराको ‘मिडियोकर नेतृत्वले देश हाँक्न सक्दैन । एग्रेसिभ एटिच्युड नै चाहिन्छ ।
यति प्रशंसा गर्नुपर्ने गरी ओलीले के गरे त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । मेरो विचारमा उनले राष्ट्रनिर्माणको जग खन्ने काम गरेका छन् । यो बाहिरबाट नदेखिने तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम हो । उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको एक वर्ष पनि भएको छैन । यो अवधिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम भएको छ । भारतसँग आवश्यकताभन्दा नजिक र चीनसँग आवश्यकताभन्दा टाढा थियो नेपाल । ओलीले दुवै देशको भ्रमण गरे । भारतसँग विगतका प्रधानमन्त्रीले जस्तै नाजायज सम्झौता गर्लान कि भन्ने भय थियो, ओलीले त्यो गरेनन । चीनसँग आवश्यक सम्झौता नगर्लान कि भन्ने चिन्ता थियो । तर उनले गरेर देखाए ।
चीनसँग गरिएको पारवहन सम्झौता र पेट्रोलियन आयातसम्वन्धि समझदारी नेपालका अभूतपूर्व उपलब्धि हुन । भोली ओली प्रधानमन्त्री पदमा भए पनि नभए पनि यो सम्झौतामा टेकेर नेपालले भारतमुखी अर्थतन्त्रबाट त्राण पाउन सक्छ । त्यसैले म भन्छु ओलीको विदेश नीति ह्याण्डलिङ बहुआयामिक र दुरगामी छ ।
ओली सही ठाउँमा छन भन्ने अरु उदाहरणहरु पनि म दिन सक्छु । उनले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भारत भ्रमण रद्द गराए । यो एउटा ठूलो सन्देश दिएका हुन उनले । १० वर्षसम्म भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आएनन । मनमोहन दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदासम्म एकपटक नेपाल नटेक्दा पनि भयो । हामीले बोलाउँदा उनीहरु नआए पनि हुने, अनि हामीले चाहिँ टाउकोले टेकेर जानुपर्ने कहाँको नियम छ ? जे भयो सही भयो ।
विगतमा अलिकति ‘लेफ्ट लिनिङ” भएको मोहनमान सैंजुलाई अमेरिकाले एग्रीमो पठायो । भारतपट्ट िझुकाव भएका यदुनाथ खनाललाई चीनले एग्रिमो पठायो । भारतलाई चाहिँ उसैको मान्छे किन चाहिने ? लोकराज बराल, दुर्गेशमान सिंह, रुक्मशम्शर नै किन चाहिने ? त्यसैको कन्टिन्यूटी थियो दीपकुमार उपाध्यायको नियुक्ती । उसले अह्राए–खटाएको काम नै गर्ने हो भने किन राजदूत पठाउने ? यस्ता मान्छे पठाउनुभन्दा नपठाउनु नै ठीक हो ।
सरकारले जे आशयले निर्णय लिएको भए पनि म राजदूत फिर्ताको स्वागत गर्दछु । एउटा राजदूतले दुई देशबीच कसरी सेतुको भुमिका खेल्नुपर्छ भन्ने उदाहरण महेश मास्के छन । दीपकुमारसँग त्यस्तो क्षमता, ल्याकत देखिएन । राजदूतमा उनको नियुक्ती नै ठीक थिएन । तीन वर्षदेखि दिल्लीको राजदूत हुन आफैं धाउने, सुशील कोइरालाले जबरजस्ति बनाइदियो भन्दै हिँड्ने ?
सरकारले अहिलेसम्म चमत्कारै गरेको छ त म भन्दिन, तर ओलीले जे गर्दैछन ठीक छ ।
प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नै एकथरीले उनीविरुद्ध कोकोहोलो सिर्जना गरिररहेका छन, मुलतः उनका अभिव्यक्तिहरुलाई लिएर । तर म ओलीका अभिव्यक्तिमा कुनै समस्या देख्दिन । ओलीले बोलेका कुराहरु महत्वाकांक्षी छन, तर असम्भव छैनन । उनले जे जति कुराहरु बोलेका छन, यथार्थको धरातलमा टेकेरै बोलेका छन ।
ओलीले एक पछि अर्को महत्वाकांक्षी भाषा बोलिरहनुका धेरै कारण होलान । यसको रणनीतिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ । हुन सक्छ उनी आफ्ना भाषणमा विरोधिहरुलाई अल्मल्याएर कुनै गम्भीर मिसन फत्ते गर्न चाहन्छन ।
नेपालले पानीजहाज सञ्चालन गर्दा भारतसितको पारवहन सन्धिले छेक्न सक्छ भन्ने कुराहरु आएका छन । छेक्छ पनि होला । तर यसको समाधान निकाल्न नसकिने होइन । पारवहन सम्झौतालाई परिमार्जन गर्न नसकिने होइन । भारतले इरानबाट पेटोलको पाइपलाइन पाकिस्तानको बाटो भएर ल्याउदैछ । जबकि पाकिस्तानसँग भारतको डरलाग्दो झगडा छ नी । रुसको सिंगै यूरोपसँग कुरा मिल्दैन । रुसको पेट्रोल पाइपलाइन यूरोपमा गएको छ । लिबियाको मेडेटेरियन समुद्रबाट झारेर यूरोपमा ४ वटा पेट्रोल पाइपलाइन पुगेको छ । पारवहनको कुरा संसोधन हुन सक्छ । वैज्ञानिकरुपमा ‘भायवल” कुरा हो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र ग्यास छ भनेर पत्ता लगाएको मोहनध्वज बस्नेतले हो तर, क्रेडिट जाइकालाई गयो । टेवहालका मोहनध्वज भागलपुरबाट इन्जिनियरिङ गरेका वैज्ञानिक हुन । त्यतिबेला काठमाडौंलाई ५० वर्षलाई पुग्ने ग्यास छ भन्ने थियो । त्यसमा धेरै उडेर गयो होला । त्यो बेलामा सिस्टम विकास गरिएन । पेट्रोल अन्वेषणमा आएको डच कम्पनीलाई इन्डियाले भगाएको हो भन्ने कुरा मिडियामा आइसकेको छ । सम्भावना देखेको भएरै इन्डियाले भगाएको न हो ।
यद्यपि पेट्रोल उत्खनन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले सोचेजस्तो चाँडो नहोला । उहाँले दुई वर्षमा उत्खनन गर्छौं भन्नुभएको छ । तर, पेट्रोल निकालेर मात्रै भएन, रिफाइन गर्नुपर्रुयो । रिफाइन कहाँ गर्ने ? नेपालमा रिफाइनरी स्थापना गर्ने कुरा टाढाको हो । प्राविधिक रुपमा पनि कठिन छ । इन्डियाले रिफाइन गरिदिँदैन । वार फुटिङमा चीनले गरिदियो भने हो । त्यछि छिटो सम्भव छैन ।
चीनबाट रेल ल्याउने कुरा आजभन्दा २० वर्ष अगाडि हुन थालेको हो । सिंगापुरबाट बेइजिङसम्म आठ हजार किलोमिटर रेल्वेको योजना लि क्वान यू र चाइनाले मिलेर गरेको मैले पढेको छु । असम्भव केही छैन । २० मिलिग्रामको १०० वटा रकेट बनाएर ३० वर्षभित्र बाहिरको प्लानेटमा छोड्ने कुरा आइरहेको छ, जसको दुईवटा विङ डेढ डेढ मिलिग्रामको हुन्छ । पिटर हकिन्स र एल्बिन आयल्ड्रीन (१९६९ मा एपोलो ११ मा चन्द्रमा ल्याण्ड गर्ने व्यक्ति) ले भनेका छन, छिटोभन्दा छिटो मंगल ग्रहमा बसाई सरौं । असम्भव के छ ?
ओलीको मुख्य चुनौति के छ भने देशमा उनीविरुद्ध माहोल खडा गर्न खोजिएको छ । अरु पार्टी मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र दुश्मनहरु छन । पहिलेदेखि २ जना उभिएर बसेका छन । सबैभन्दा खतरा माधव नेपाल छन । यद्यपि, ओलीको हाइट पार्टीको नेताभन्दा धेरै माथि उठिसकेको छ । माधव नेपाल उनको अगाडि बाउन्ने भइसकेका छन । तर बेला–बेला भकुण्डे भुत जसरी तर्साउछन ।
सरकार परिवर्तनको चर्चा जबरजस्त रुपमा चलाइएको छ । तर यतिबेला कांग्रेसको ‘फेस अफ” भएको अवस्था छ । उ जनतामाझ चरम अलोकप्रिय छ । उसँग कुनै बलियो एजेन्डा छैन । अर्को शक्ति माओवादी न यता न उताको अवस्थामा छ । माओवादीले साथ दिन छोड्यो भने सरकार ढल्ने हो । तर उसले सजिलै सरकार ढाल्न सक्दैन । माओवादी इन्डियाको नजिकै हुन सकेको छैन । चीनले उसलाई विश्वास गरिसकेको छैन । यतिबेला सरकार साथ छाड्यो भने माओवादी कसैको पनि विश्वसनीय हुन्न । न भारतको न चीनको न नेपाली जनताको । माओवादी कहिँको पनि रहन्न । त्यसैले पनि सरकार छाड्नुअघि माओवादीले हजारचोटी सोच्नुपर्छ ।
तर, मलाई लाग्छ त्यस्तो परिस्थितिमा सारा नेपाली जनता एकजुट हुन्छन । ओलीलाई सबैले साथ दिन्छन । अन्त्यमा भारतले सक्दैन । छिमेकीहरुसँग दुश्मनी राखेर विश्वको नेता हुन सकिदैन भन्ने इन्डियनहरुले रियलाइज कहिल्यै गरेनन, अब गर्छन कि ?
ओलीको खास पृष्ठभूमि कस्तो हो म भन्न सक्दिन । उनी विगतमा भारतसँग नजिक थिए भन्ने आरोप लाग्छन । त्यसै आरोप लागेन होला । हावा नआइकन पात हल्लिदैन । तर, जसले पनि आफूलाई सच्याउन पाउँछ । ओलीले पनि सच्याएका छन । देशप्रतिको कर्तव्यवोध गरेका छन ।
तनावपूर्ण राजनीतिका बीच ओली अहिलेसम्म अडिएको भनेको आफ्नो आत्मबलले गर्दा नै हो । उनको आयू लम्ब्याउने मुख्य औषधि नै आत्मबल हो । यस्तो आत्मबल धेरै ठूलो कालखण्डमा आउँछ । विगतमा यस्तो आत्मबल महेन्द्रमा देखिएको थियो । महेन्द्र स्कुल कलेजमा पढेका होइन । घरेलु शिक्षा प्राप्त हुन । उनीसँग पैसा थिएन, सोहोरेर सबै राणाले लगेका थिए । अर्काले छोडेको सिस्टममा हात हाल्नु परेको थियो । को आफ्ना हुन र को होइनन थाहा थिएन । नजिकको छिमेको सहयोगी थिएन । अर्को छिमेकीसँग दुरी थियो । त्यो महासंकटमा प्रकृतिले दिएको ‘सिक्स्थ सेन्स” र भगवानले दिएको आत्मविश्वासलाई फ्यूजन गरेर बनेको मनोबल महेन्द्रमा थियो । त्यो अद्भुत थियो । महेन्द्रभन्दा अघि जंगबहादुरको मनोबल थियो । आफू सात जना दाजुभाई मिलेर कोतमा भएका सबै मान्छे काट्छु भन्नु कम ठूलो कुरा होइन । ६२र६३ मान्छे कोट्दा आफ्नो परिवारको पनि ज्यानको सवाल थियो । आफूले पो हतियार लुकाएको छ त, अर्कोले पनि लुकाएको थियो भने के हुन्थ्यो ? कि पृथ्वीनारायण शाहको थियो मनोबल । चार सय मान्छे लिएर किर्तिपुरमा आक्रमण गर्न आएका हुन । जबकि किर्तिपुरको जनसंख्या ६ हजार थियो । आफू फेदमा बसेर लड्नु भनेको दुस्साहस हो । माथिबाट ढुंगै गुडाए पनि पुग्छ । त्यसै भएको होइन त्यो । ओलीका दुर्गुण पनि छन । उनी अझै पनि एउटा सानो घेरोभित्र कैद छन जस्तो बुझिन्छ । धेरै मान्छेसँग आइडिया सेयर गर्दैनन र अरुका कुरालाई महत्व दिँदैनन । मैले सुनेअनुसार ओलीले नेपालमा बाबुराम आचार्य बाहेक अरु कसैलाई मान्छे नै गनेका छैनन । उनको यो अज्ञानताभन्दा पनि अहम हो । तर अहम भनेको काहिलेकाहीँ शक्ति पनि भइदिन्छ । महादेवले विष पिउनु पनि अहम थियो । त्यो आत्मविश्वासले पिएको हो । हेरौं ओलीको अहम्ले के–कति काम गर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित साभार) Onlinekhabar…
One Response to राजा महेन्द्र पछिको आत्मबल ओलीमा देखियोः सौरभ